NUUR-CADDE: Booliis, Samafale, Siyaasi iyo Diblomaasi | Hadalsame Media
Home Maqaallada NUUR-CADDE: Booliis, Samafale, Siyaasi iyo Diblomaasi
(Hadalsame) 12 Abriil 2020 – Nuur Xasan Xuseen, Nuur –Cadde, wuxuu ahaa nin muddo ka badan nus qarni u shaqeeyay Dowladda Soomaaliya, jagooyinka dalka ugu sarreeyana ka gaaray.
Nuur waxay dadku inta badan ku yaqaanneen Booliiska iyo xilka Ra’iisal Wasaare laakiin xaggeyga shaqada qalbigeyga u dhow ee uu qabtay waa howsha samafalka ee Bisha Cas.
Boqoradda oo abaalmarisay Dr. Axmed Food – Cadde
Nuur wuxuu markii hore ka tirsanaa Guddiyada Bisha Cas oo mar mar uun fadhi isugu yimaada korna kala socda Howlaha Bisha Cas. Markii 1991 ay Dowladdii Soomaaliya burburtay ayaa waxaa dagaalku saameeyay Guddoomiyaha Bisha Cas, Dr. Axmed Food-Cadde, oo inkasta oo uu isku dayay in uu ku shaqeeyo Bisha Cas xarunteeda Muqdisho ay ku adkaatay in howshu ay hagaag u socoto.
Waxaa u sabab ahaa dagaallo qabiil, kuwo siyaasadeed iyo amni darro baahday oo ay ka faa’iideysteen burcad – dhac iyo boob-doon ah oo agabka hey’adaha Dowladda, kan samafalka iyo hantida gaarka loo leeyahay aan midna u aabba yeeleyn. Si ay taas u gaaraanna aan ka waabaneyn in ay naf Aadane gooyaan.
Bisha Cas oo xilliga loogu baahi badan yahay ay tahay xilliga colaadaha iyo xilliga masiibooyinka ay abaaraha iyo cudurrada saf marka ahi ka mid yihiin, waxay ku guuleysatay in aan marnaba albaabbada loo laabin. In aanay marnaba ka qixin Xamar, marnaba ka maqnaan goobaha looga baahan yahay. Xataa markii ay Muqdisho iyo Kismaayo colaaddu ay ka dhexeysay iyo markii ay Muqdisho laba u qeybsantay, waxaa Bisha Cas u suurta gashay in ay dhinacyada oo dhan ay ka howlgasho.
Goobaha ugu daran dagaalka waxaa ka mid ahaa Muqdisho oo Nuur – Cadde uu fadhiyo, Xamar labada dhinac ee markaa uu dagaalku u qeybiyayna ku leh laba wakiil. Magaalooyinka kale ee dagaalka xooggani ka dhacay waxay ahaayeen Kismaayo oo Axmed – Goobbo uu joogay iyo Baydhowa, oo dagaalka ay macluul maalintii boqol ruux dishaa ay u dheereyd 1992. Xuseen Daahir ayaa ka howlgalayay oo ahaa mas’uulkii Bisha Cas ee Baydhowa burburka ka hor iyo ka dib labadaba.
Nuur – Cadde
Nuur – Cadde oo la shaqeynaya Guddoomiyihiisa Dr. Food Cadde, waxay labada mas’uul ku guuleysteen in iyada oo ku howlgaleysa magaca Bisha Case ee Somaliland uu ururku howlo samafal ka fuliyo Somaliland, iyada oo Bisha Cas ee Soomaaliyeedna ay raalli ka tahay. Kulammada caalamkana farriin ay isla og yihiin ayay ka jeedinayeen maaddaama ay howshu tahay samafal ka fog siyaasad.
Waxay wada shaqeyn dhow oo xagga samafalka ah ay lahaayeen rag uu horseed u yahay Cali Jirde.
Macallimuu oo Ra’iisal Wasaaraha ku xiraya Studiyaha BBC
Iyada oo sida aan maqlay ay soo jeedintiisa gacan weyn ku leeyihiin saaxiibbadiisii Bisha Cas, Dr. Food – Cadde iyo General Cabdinuur Yusuf, ayaa November 2007 Madaxweyne Cabdullaahi Yusuf uu Ra’iisal Wasaare u magacaabay Nuur Xasan Xuseen, Nuur – Cadde.
Waxay ahayd xilli aad u adag, xasaasina ah. Ciidammada Ethiopia iyo kuwa Dowladda ayaa dagaal qaraar kula jiray ciidammadii Maxaakiimta.
Qurbo joog is abaabushay ayaa ku biirtay.
Madaxweyne Cabdullaahi Yusuf – Bush House
Xilligii ugu adkaa wuxuu ahaa markii khilaaf aan qarsoodi ahayni soo dhex galay Madaxweynaha, Cabdullaahi Yusuf iyo Ra’iisal Wasaaraha Nuur Xasan Xuseen.
Intii aan baaritaanka qoraalkaan ku jiray, il iga xog ogaalsan waxay ii sheegtay in khilaafka Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaruhu uu ka billowday dhismaha Xukuumadda.
Cabdiweli iyo Nuur, Muqdisho, Arbaca, 1 Abriil 2015.
Waxaa kale oo aan xusuustaa wareysigii ugu adkaa ee aan la yeeshay Ra’iisal Wasaare Nuur – Cadde, lagana yaabo in uu ahaa kii ugu adkaa ee laga qaaday inta uu xilka hayay. Dhowr jeer ayaa ciidan magaca Dowladda sita lagu eedeeyay in uu bililiqeystay suuqa Bakaaraha. Galab ay Bakaaraha bililiqo ka dhacday ayaan Caawa iyo Caalamka wareysi kula yeeshay Ra’iisal Wasaare Nuur – Cadde oo hore u ballanqaaday in uu wax ka qabanayo xadgudubka ciidanka Dowladda ee soo noqnoqday.
Wuxuu Ra’iisal Wasaaruhu ku dooday in aan ciidanka galabtaas dhacay Bakaaruhu aanay ku shaqeyneyn amarka Dowladda. Waxaan kula dooday in muwaaddinka la dhacay aanay macna u sameyneyn in askariga dhacaya la soo amray iyo in kale. Sidaa darteed waxaan Ra’iisal Wasaaraha weydiiyay waxa looga qanci karo oo uu dadka la dhacay iyo Soomaali oo dhan uu u sheegi karo.
Wadahadal, Heshiis iyo Doorasho
Madaxweyne Shariif – Bush House
Wadahadallo billowday intii uu Madaxweyne Cabdullaahi Yusuf xilka hayay, ayaa ka socday Djibouti markii uu Madaxweynuhu is casilay. Wadahadlku wuxuu u dhexeeyay Dowladda Federaalka iyo Kooxaha hubeysan ee dagaallamaya oo ay matalayeen Madaxda Siyaasadeed ee muqaawamada oo xaruntoodu ay tahay Asmara.
Waxay labada dhinac isku af garteen in xabbadda la joojiyo iyo in 275-ta kursi ee Baarlamaanka in la eg lagu daro. Xildhibaannada fariisanayana ay muqaawamadu magacawdaan . Ka dibna la qabto doorasho Madaxweyne.
Aisha Yonis Nuur oo macsalaameyneysa
Nuur Xasan Xuseen oo taageero ka haysta siyaasiyiin iyo dhinacyo beesha caalamka ah, wuxuu u tartamay Madaxweyne.
Nuur-Cadde taageero kama haysan muqaawamada soo buuxisay Baarlamaanka, sidoo kale taageere kama haysan taageerayaasha Cabdullaahi Yusuf ee Baarlamaanka hore u fadhiyay. Sidaa darteed, waxaa guuleystay Shariif Shiikh Axmed oo Jannaayo 2009-kii loo doortay Madaxweyne. Iyada oo murashaxa ku soo xigaana uu noqday General Maslax Maxamed Siyaad.
FG: Waxaan u mahadcelinayaa Shacni Nuur – Cadde oo ila wadaagtay sawirrada aan bartaan ku soo bandhigay saddex; kan koowaad, kan saddexaad iyo kan siddeedaad.
Previous articleSIR QARAN: Sweden oo eedday ku dhowaad 8 milyan oo MAASGARE oo ay gubtey 6 sano hadda kahor (Muuqaal + Sawirro)
Next articleQofkii ilaa hadda ugu xil sarreeyay oo cudurka Covid-19 ugu dhintay magaalada Muqdisho